Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Ukudibanisa uhambo kunye nokusebenza okukude kuyindlela ekhulayo
Ukhenketho lokuzonwabisa • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-TUI ijikela kwiimarike ezizezinye ezinje ngenkqubo ekhulayo yokuhamba ngokudibeneyo kunye namava okusebenza ekude njengoko iqala iphakheji 'yokusebenza'.
Ngenxa ye-COVID-19 ubhubhane wehlabathi osebenza ekhaya ngoku yinto eqhelekileyo yabaninzi.
Imisebenzi inokunyuka ekuthandeni njengoko umsebenzi omninzi uguquguquka njengoko ilizwe libuyela eofisini.
Ukungena kwangoko kwe-TUI kwimakethi yokusebenza kunokuyibona iyinkokeli yentengiso yakuqala.
Ngenxa yemfuno yokuhamba ekulindeleke ukuba ibuye kancinci, i-TUI ibuyela kwezinye iimakethi ezinje ngenkqubo ekhulayo yokuhamba ngokudibeneyo kunye namava okusebenza ekude njengoko iqala iphakheji 'yokusebenza' entsha ngenjongo yokuba ngumboneleli ophambili wale nkonzo intsha yohambo.
Ngenxa yobhubhane olusebenzela ekhaya ngoku yinto eqhelekileyo yabaninzi kwaye ukusebenza kunganyuka kuthandwe njengoko kusenziwa umsebenzi oguqukayo ngakumbi njengoko ilizwe libuyela eofisini.
Tui uyiqaphele le meko ikhulayo kwangoko kwaye wayila iphakheji yabo enezinto zokusebenza ezikude engqondweni kubandakanya iWi-Fi kunye nendawo yokusebenzela ezinikezelweyo kwiihotele zayo ezingama-30 zehlabathi. Ukusebenza okukude kunokuba yinto ephambili kwabaninzi, kwaye ukungena kwangoko kwe-TUI kwintengiso yokusebenza kunokuyibona iyinkokheli yentengiso yakuqala.
I-poll yakutshanje ibonakalise ukhetho oluphezulu lokundwendwela iofisi emva kwe-COVID-19 nge-29% yabaphenduli behlabathi abanqwenela ukutyelela iofisi rhoqo ngenyanga, ngekota, okanye xa kuceliwe ngabaphathi. Omnye omnye kwabahlanu (21%) akaze afune ukutyelela iofisi kwakhona.
Utshintsho ekusebenzeni okude kunye nokukhetha kwabantu ukutyelela iofisi ngokufuthi kubonisa ithuba elifanelekileyo lokuthengisa Tui's' umsebenzi iiphakheji. Ubhubhane we-COVID-19 unyanzelise ukusebenza ngokukude kuninzi lwabasebenzi baseofisini, kwaye utshintsho lwabo kwiimvakalelo lubonisa umnqweno wokugcina amalungiselelo akhoyo. Uninzi luya kunqwenela ukubaleka, kwaye utshintsho lwendawo entle lunokubonelela ngemveliso.
Olunye uphando olwenziweyo lufumene ukuba i-45% yabaphenduli bathe amathuba angcono okugxila sisizathu sokugcina ukusebenza kude. Ukuphunyuka ekusebenzeni kuya kubonelela ngamava omsebenzi okude kude neziphazamiso zekhaya kunye nokutya okubandakanya konke kubandakanya, abasebenzi banokugxila emsebenzini ngaphandle komthwalo owongezelelweyo wemisebenzi yemihla ngemihla.
Tui ngumqhubi wokuqala wokhenketho ukubonelela ngeephakeji ezithile kubasebenzi abakude. Nangona amanye amaqela ehotele ebonelele ngeephakeji ezifanayo Tui, uninzi lunika kuphela usuku lokusetyenziswa kwegumbi. Umqhubi wezokhenketho udibanise iimfuno zokusebenza ezikude kunye nokuhlala okuphumla kwiihotele zayo.
Ngemfuno yokuhamba ekulindeleke ukuba ithathe ixesha ukuphinda ibuye, ukujolisa kwimfuno eyandayo yokusebenza kude ngokubonelela ngeephakeji zomsebenzi kunokuhlawula Tui kunye nokuxhasa ukubuyela ngokukhawuleza kumanqanaba angeniso ngaphambili e-COVID yomqhubi wokhenketho.